Professional Garage Jack 2.5 Ton
KDE13SS3 Kipro Generator
SDLG B877 (BACKHOE LOADER)မြေကြီးသယ်စက်
DIESEL GENERATOR SETS P730P1 / P800E1 လုပ်ငန်းသုံးမီးစက်
Hand Stacker2Ton - 1.6m - ဟိုက်ထရောလစ် အမြင့်တင်စက်
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 115122 view counts
Model : CYL06
Certification : CE, ISO 9001
Place of Origin : Myanmar
Engine : Honda GX160 5.5hp
Centrifugal force : 13.5KN
Walking Model : Forward & Back
Wheel Size : 450*600
Vibratory Method : Automatic
Grade Ability : 20%
Weight : 280kg
Vibration frequency : 70Hz
Static Load : 45N/cm
Dimension : 1380*920*1100mm
Capacity of Water Tank (L) : 15
Capacity of Oil Tank (L) : 3.6
Walking speed (km/h) : 0-4
Starting Way : Manual
Drive Mode : Hydraulic drive
Package Size (mm) : 1070*980*1200
COSIN CYL06 တံဆိပ်လမ်းကြိတ်စက် (smooth wheel road roller) သည် အဓိကအားဖြင့် ကတ္တရာ၊ သဲမြေဆီလွှာနှင့်ကျောက်စရစ်များပေါ်သို့ ဖိရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင်မြက်ခင်းများ မျက်နှာပြင်ညှိဖို့အတွက်များလဲ အသုံးပြုကြသည်။
1. ဟွန်ဒါအင်ဂျင်၊ သာလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စက်ကိုစတင်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူခြင်း
2. သေးငယ်တဲ့ဧရိယာအတွင်းမှာပါ အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
3. ဟိုက်ဒရောလစ်ဒရိုက်စနစ်နှင့် Stepless အမြန်နှုန်း၊ Direction ပြောင်းရတာလွယ်ကူခြင်း။
4.သယ်ယူရလွယ်ကူပြီး handrail ၏အမြင့်ယန္တရားထိန်းညှိခြင်း။
5. NSK တည်နေရာ နှင့် MITSUBISHI V-ခါးပတ်။
6. သံချေးမတက်၊ လှပသောဒီဇိုင်း။
လူကြီးမင်းတို့မှာယူသော စက်ပစ္စည်းအားလုံးကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် အရောက်ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ ၀ယ်ယူပြီးသော စက်ပစ္စည်းအားလုံးကို Sales after Services စနစ်ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
For COSIN တံဆိပ်လမ်းကြိတ်စက်
May I get the quotation for "COSIN တံဆိပ်လမ်းကြိတ်စက်" ?